CBD Miyay Ka Caawin Kartaa Dadka qaba cudurka psoriasis inay helaan Raaxo? • Dawooyinka Inc.eu
CBD Miyay Ka Caawin Kartaa Dadka qaba cudurka psoriasis inay helaan Raaxo?
Jason E. Hawkes, oo ah borofisar ku takhasusay cilmiga maqaarka ee UC Davis Health, ayaa arka bukaanno badan oo qaba cudurka psoriasis oo xiiseynaya cannabidiol (CBD) bedel ahaan ama daaweyn dhameystiran oo xaaladooda ah.
Ma kareemada maqaarka leh soosaarida xashiishka iyo saliida CBD lagu daryeelaa daaweynta daryeelka maqaarka ee beddelka ah? Su'aashan iyo Jawaabtan, wuxuu ka jawaabayaa su'aalaha ku saabsan amniga iyo waxtarka isticmaalka CDB si loogu daaweeyo cudurka psoriasis ama loo yareeyo astaamaheeda.
1 Waa maxay cudurka psoriasis?
2 Waa maxay CBD miyayna ku caawin kartaa cudurka psoriasis?
3 Sidee cannabinoids sida CBD saameyn ugu yeeshaan jirka?
4 Waa maxay halista isticmaalka waxyaabaha CBD?
5 Ma jiraan daraasado caafimaad oo ku saabsan isticmaalka CBD ee cudurka psoriasis iyo maqaarka oo kale oo hurisa?
6 Maxaa bukaanjiifka cudurka psoriasis qaba ay sameeyaan markay tixgelinayaan CBD?
Waa maxay cudurka psoriasis?
Cudurka psoriasis waa xaalad joogto ah, xaalad barar oo la xiriirta habka difaaca jirka. Marka unugyada difaaca ay ku carqaladeeyaan bukaanada cudurka psoriasis, waxay u keenaan maqaarka maqaarka casaan jajab ah iyo caabuq jidhka oo dhan ah.
Ilaa 30% bukaanada qaba cudurka psoriasis sidoo kale waxay qabaan cudurka loo yaqaan 'psoriatic arthritis' oo leh astaamo ay ka mid yihiin subaxnimada oo adkaata, daal, faraha iyo suulasha oo barara, xanuunka wadajirka ah iyo cidiyaha oo isbedela. Bukaannada cudurka Psoriasis sidoo kale waxay leeyihiin halista sii kordheysa ee xaaladaha kale sida cudurrada wadnaha, istaroogga, cudurka kalyaha, dhibaatooyinka hurdada iyo neefsashada, diiqadda iyo walwalka, dhiig karka, sokorowga iyo buurnida.
Waa maxay CBD miyayna ku caawin kartaa cudurka psoriasis?
Cannabis waa warshad ka kooban in ka badan 80 xeryahooda kiimiko ahaan firfircoon oo loo yaqaan cannabinoids iyo in ay leeyihiin nashaadaadyo badan oo bayoolaji ah oo jirka ah, oo ay ku jiraan anti-bararka, antioxidant, iyo saameyn nafsi ah.
In kasta oo dawooyin fara badan oo wax ku ool ah oo la taaban karo looguna talagalay daaweynta cudurka 'psoriasis', haddana bukaanno badan ayaa weli la il daran cuncun iyo xanuun joogto ah. Waxay sidoo kale la kulmaan cuqdad iyo cawaaqib xumo xagga maskaxda ah oo haysata xaalad maqaarka oo aad u muuqata. Sidaa darteed layaab ma leh in bukaanada qaba cudurkan ay raadsadeen gargaar iyada oo loo marayo xulashooyin daaweyn oo kala duwan, oo ay ku jiraan waxyaabaha ku saleysan xashiishka sida CBD.
Bulshada caafimaadka ayaa kaliya ogaatay dhamaadka cirifka barafka ee ku saabsan faa iidooyinka iyo halista ka imaan karta waxyaabaha ka soo baxay xashiishadda. Saamaynta kiimikada ee CBD ee jirka waa in si taxaddar leh loo tixgeliyaa. Saameynaha waxaa go'aamiya doorsoomayaal badan, oo ay ku jiraan habka loo geeyo jirka (arjiga jirka, neefsashada, qaadashada afka), qiyaasta ama xoojinta cannabinoid, ama kiimikada (yada) gaarka ah ee laga soocay dhir gaar ah.
Hase yeeshee, waa fikrad macquul ah oo ah in faa'iido u leh cilmu-nafsiga (tusaale ahaan, yareynta walwalka) iyo saameynta anti-bararka ee cannabinoids ay gacan ka geysan karto yareynta xaaladaha psoriatic.
Sidee cannabinoids sida CBD saameyn ugu yeeshaan jirka?
Sida CBD, delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) Cannabinoid caadi ah oo laga soocay geedka xashiishka. Si kastaba ha noqotee, CBD iyo THC waxay leeyihiin waxyaabo kala duwan waxayna si weyn ugu kala duwan yihiin saameynta ay u leeyihiin jirka aadanaha. Labada isku-dhafan waxay ku shaqeyn karaan meeshii nidaamka cannabinoid-ka jirka - oo loo yaqaan 'endocannabinoid system'.
THC iyo CBD waxay la falgalaan qabtayaasha unugyo gaar ah ama nidaamka neerfaha si ay saameyn ugu yeeshaan noocyo kala duwan oo saameyn jireed ah. Wax soo saarka xashiishka ayaa kaa caawin kara yareynta saameynta astaamaha iyo cabashooyinka sida xanuunka, cuncunka ama dhibaatooyinka hurdada ee bukaanka cudurka psoriasis. Cilmi-baarista caafimaad ayaa kaa caawin karta furfurista farsamooyinka isku-dhafan ee cannabinoids sida CBD ama THC ay saameyn ku yeeshaan caafimaadka iyo wax ka beddelaan nidaamyada bayoolojiga sida jawaabta difaaca jirka.
Isku soo wada duuboo, CBD waxay umuuqataa inay hayso qaar badan oo ka mid ah saameynta nafleyda ee THC, iyada oo aan "sare" dadka badankood lala xiriirin THC ama marijuana. Farqigaas muhiimka ah wuxuu u horseeday shirkado badan ama kooxo cilmi baaris ah inay bartaan oo horumariyaan alaabada CBD saafi ah oo laga yaabo inay aad u jecel yihiin bukaanada doonaya inay ka fogaadaan ama u dulqaadan karin saameynta maskaxeed ee xoogan ee alaabooyinka ku saleysan THC. Farqigaas ayaa sidoo kale ka dhigay CBD xulasho caan ah oo ka dhexeysa macaamiisha isku dayaysa alaabada ku saleysan xashiishadda markii ugu horeysay.
Waa maxay halista isticmaalka waxyaabaha CBD?
Khataraha CBD iyo alaabada kale ee laga soosaaray xashiishadda bukaanka qaba cudurka psoriasis iyo cudurada kale ee maqaarka ee bararsan si taxaddar leh looma baran. Tani waa baahi aan la daboolin oo u qalantaa fiiro gaar ah iyo baaritaan. Si kastaba ha noqotee, daraasadihii hore ee caafimaadku waa macluumaad waxayna soo jeedinayaan in bukaanada cudurka psoriasis ay tahay inay ka digtoonaadaan halista suurtagalka ah.
Daraasado dhowr ah ayaa lala xiriiriyay CBD iyo alaabooyinka kale ee laga helo cannabis si ay uga sii daraan cudurka wadnaha, buurnida iyo sonkorowga, cudurka beerka dufanka leh, ama qatarta sii kordheysa ee lagu daaweynayo cudurka caloosha. Bukaannada cudurka 'Psoriasis' waa inay ka feejignaadaan astaamaha cudurka psoriasis la xiriira iyo inay sii xumaadaan alaabada xashiishka. Dhibaatooyinka soo raaca waxay u badan tahay qaadashada nidaamka ama qiyaasta sare.
Ma jiraan daraasado caafimaad oo ku saabsan isticmaalka CBD ee cudurka psoriasis iyo maqaarka oo kale oo hurisa?
Maya Waxaa loo baahan yahay tijaabooyin caafimaad oo la xakameynayo ama ugu yaraan diiwaangelinta bukaan-socodka ama xog-ururin si loo ururiyo macluumaadka. Waxay u oggolaaneysaa in lala socdo halista iyo faa'iidooyinka ka iman kara CBD iyo alaabooyinka kale ee xashiishka loogu talagalay daaweynta cudurrada psoriatic.
Bulshada caafimaadku waxay u baahan tahay inay si hal abuur leh uga fikirto siyaabaha loo qiimeeyo loona go'aamiyo badbaadada iyo waxtarka alaabada CBD xaaladaha gaarka ah. Waxaan u baahanahay inaan kordhino aqoonta CBD iyo waxyaabaha kale ee ka soo baxa cannabinoid.
Maxaa bukaanjiifka cudurka psoriasis qaba ay sameeyaan markay tixgelinayaan CBD?
Sameynta cilmi baaris waa muhiim. Bukaannada ka baaraandegaya qaababka guud ama noocyada kale ee daaweynta caafimaad ee xaaladooda joogtada ah waa inay la yeeshaan wadahadal furan bixiyaha daryeel caafimaad si ay si fiican ugula wareegaan muuqaalka xashiishka. Raadinta liisaska maaddooyinka hufan iyo alaabooyinka sumcad wanaagsan ku leh ayaa sidoo kale muhiim ah ka hor inta aan la tijaabin CBD.
Ilaa aan ka helno macluumaad dheeri ah, oo dhameystiran oo ku saabsan saameynta ay alaabooyinka xashiishadda ay ku yeelan karaan jir ahaaneed jirka, waxaan ku dhiirigelinaynaa bukaanada cudurka psoriasis inay ka raadsadaan ilaha ururada caafimaadka ee aasaasay iyo kooxaha u dooda bukaanka si ay u gaaraan go'aanno xog ogaal ah. National Psoriasis Foundation (NPF) waxay hada ka shaqeyneysaa soo saarida tilmaamaha cudurka psoriasis ee la xiriira isticmaalka xashiishadda.
Akhri wax dheeraad ah caafimaadka.ucdavi.edu (Source, EN)
5 dareen fiican oo aad la kulmi karto marka aad sigaar cabeyso
Maanta, cabbista xashiishku waxay ku soo noqnoqoneysaa Mareykanka iyo dalal kale oo ...
Daraasad cusub, boqolkiiba 68 kaqeybgalayaashu waxay kujawaabeen in galmada 'ay kafiicantahay' xashiishada kadib ...
Dawooyinka casriga ah ama nootropics: midkee ayaa adiga kugu habboon?
Ma leedahay walbahaar, waqtiyada adag ee adag, imtixaannada kama-dambaysta ah ama maskaxdaadu sida caadiga ah uma cadda? Isku day…